थर्काउँदै लगानीकर्ताले भने–‘किन चाहियो ४ वटा संघ ? खुसुखुसु गर्न ?’(भिडियोसहित) Bizshala -
थर्काउँदै लगानीकर्ताले भने–‘किन चाहियो ४ वटा संघ ? खुसुखुसु गर्न ?’(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । ‘व्यक्तिपिच्छे लगानीकर्ताको संगठन ?’ पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारका लगानीकर्ताको सर्कलमा बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो यो । सामान्य असहमतिमै फूट्ने र नयाँ लगानीकर्ता संघ खोल्ने प्रवृति हाबी भएका कारण यो प्रश्न उठ्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ ।
फूटेर ४ वटा भएका सेयर लगानीकर्ता संघका कतिपय नेताहरुको गतिविधि हेर्ने हो भने यस्ता संगठनको सान्दर्भिकता समेत देखिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र बढी केन्द्रीत कतिपय नेताका कारण यी संघप्रति लगानीकर्ताहरुको निराशा दिनहुँ बढ्दो छ ।
लगानीकर्ताको नेता समेत सामूहिक हित भन्दा व्यक्तिगत हितका पछाडि दौडँदा आम लगानीकर्तामा यस्ता संघ संगठनप्रति खराब दृष्टिकोण बनेको छ ।
पछिल्लो समय हेर्ने हो भने आम लगानीकर्ताको हित भन्दा पर गएर लगानीकर्ताका केही नेताहरुले नेपाल बैंकको एफपीओ गैरकानूनी रुपमा मर्चेन्ट बैंकरबाट किने । यो प्रकरणमा लगानीकर्ताको नेता हुनुको हैसियतलाई उनीहरुले राम्रैसँग भजाए ।
यस्तै, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजनमा समेत आम लगानीकर्ताले सस्तोमै सेयर किन्न पाउने अवसरको कत्लेआम तिनै नेताले गरे । आफूले गरेको लगानी स्वात्तै घट्ने भएपछि आम लगानीकर्ताको बाहाना बनाउँदै नेप्सेलाई दवाब दिए र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे ।
यी र यस्तै प्रकरण घाम झै छर्लङ भएपछि र आफूले नेता मानेका केही भित्र भित्रै सेटिङमा लाग्न थालेपछि लगानीकता समेत आजित बनेका छन् । त्यस्ता नेताहरुको स्वार्थी व्यवहारबाट आजित भएकै कारण लगानीकर्ताले त्यस्ता संघ र नेताहरुको भूमिकाप्रति सार्वजनिकस्थलमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रसंग हो, सोमबार नेप्से परिसरमा भएको प्रदर्शनको । प्रदर्शनको सुरुवातमै केही लगानीकर्ताले नेताहरुको सातो खाए । चारवटा लगानीकर्ताका संगठनले आह्वान गर्दा समेत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति भएपछि कतिपयले संगठनहरु कमजोर बन्दै गएका र नेताहरुलाई लगानीकर्ताले पत्याउन छाडेका टिप्पणी गर्न समेत भ्याए ।
एक लगानीकर्ताले नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै भने–‘चारवटा संघ किन चाहियो ? हिम्मत छ भने एउटा संगठन बनाएर आउनुहोस् । सबैको मत चाहिन्न्छ भने चारवटा संघ विघटन गरी एउटै संघ बनाउनुपर्छ ।’
ती लगानीकर्ताको भनाईप्रति धेरैले सहमति जनाइरहेका थिए । लगानीकर्ताका नेताहरुले नियामक र सरोकारवालाहरुसँग खुसुखुसु स्वार्थ पूरा गरिरहेकातर्फ इंगित गर्दै अर्का लगानीकर्ताले भने–‘ तपाईहरु एक बनेर आउनुहोस्, हामी नेतृत्व मान्न तयार छौ । तर, अब खुसुखुसु चल्दैन ।’
कतिपय लगानीकर्ताहरुले लगानीकर्ताका नेताहरुले आफूहरुलाई प्रयोग गरी बजार बढाउने गरेका र ११ बजेपछि बजार हरियो हुनेबित्तिकै चूप लाग्ने गरेका आरोप लगाए ।
‘यो आम आक्रोश हो, यसलाई गलत नबुझ्नुहोला ।’ लगानीकर्ता भन्दै थिए–‘चारवटा संघले आह्वान गर्दा आएको मास यही हो ? मलाई भनेको भए म एक्लैले ५० जना ल्याइदिन्थेँ ।’
त्यही समूहमा कुनै लगानीकर्ता चाहि आफूहरुले पनि अब संगठन बनाउने र त्यसको आडमा अवसरको सदुपयोग गर्दै करोडपति बन्ने ठट्यौली समेत गरिरहेका देखिन्थे ।
nepal investors forum nepal puji bajar laganikarta sangh nepal puji bajar sangh share lagaanikarta sangh